फक्सबेगनको कार किन्नुहुँदैछ ? पख्नुहोस्, तपाईंको ज्यान खतरामा पर्नसक्छ !
काठमाण्डौ । फक्सबेगन कम्पनीको कार खरीद गर्नुहुँदैछ ? एकछिन पख्नुहोस्, पछिल्लो समय उत्पादन भई संसारभरि बिक्री भइरहेका यो कम्पनीको ११ लाख कारमा दुर्घटना र त्यहाँबाट उत्सर्जन हुने खराब ग्याँसले मानव स्वास्थ्य समेत उच्च जोखिममा रहेको भन्दै जर्मनीको एक जाँच एजेन्सीले छानबिन गरिरहेको छ । जर्मनीको जाँच एजेन्सीले फक्सबेगन कम्पनीमाथि...
थोरै पैसामा धेरै प्रचार गर्ने पतञ्जलीको कमालको शैली !
काठमाण्डौ । योग गुरु बाबा रामदेवको पतञ्जली आयुर्वेद भारतकै सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । यो कम्पनीले नेपाली बजारमा समेत उस्तै छाप छाडेको छ । भारत लगायतका मुलुकमा पतञ्जलीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई समेत टक्कर दिइरहेको छ । यसका लागि पतञ्जलीको निकै राम्रो मिडिया रणनीति समेत प्रमुख कारण रहेको...
विश्वकै पहिलो डलर अर्बपति हुँदै बिल गेट्स !
काठमाण्डौ । अहिलेसम्म विश्वका कयौं धनीहरुको साथमा अरबौको सम्पत्ति छ । तर आगामी २५ वर्षभित्र बिल गेट्स विश्वकै पहिलो डलर खर्बपति हुनेछन् । अक्सफाम इन्टरनेशनलको एक रिपोर्ट अनुसार ६१ वर्षका विश्वकै सबैभन्दा धनी गेट्स अबको २५ सालपछि विश्वकै पहिलो डलर खर्बपति बन्नेछन् । सन् २०४२ पछि बिल गेट्सको सम्पत्तिले १० खर्ब डलर अर्थात १० लाख...
खुला बजारलाई ट्रम्पको धक्का
काठमाण्डौ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी निर्णय र घोषणाले खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा ठूलो धक्का दिएको छ। धेरैले अनुमान गरे विपरित निर्वाचित भएका ट्रम्पले चुनावका क्रममा घोषणा गरेअनुरुप नै ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिप (टिपिपि) नाम गरिएको व्यापार...
अस्ट्रेलिया जाँदा पासपोर्ट बोक्न नपर्ने !
काठमाण्डौ । अस्ट्रेलियाले हालै आफ्ना सबै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको समीक्षा गरेको खबर बाहिर आएको छ । यसका साथै सन् २०२० सम्ममा यस्तो प्रविधि तयार गर्ने घोषणा गरिएको छ, जसमा हवाई यात्राका लागि यात्रीहरुले पासपोर्ट नबोक्दा पनि हुनेछ । पासपोर्टको ठाउँमा यात्रीहरुको अनुहार नै काफी हुनेछ । यहाँको इमिग्रेसन...
डोनाल्ड ट्रम्पको कडा नीति, हजारौ गैरअमेरिकीले देश छाड्नु पर्नसक्ने !
काठमाण्डौ । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिको रुपमा शुक्रबार सपथ लिएका छन् । सपथ ग्रहणपछि उनले नयाँ भिजन तथा युुग सुरु भएको प्रतिक्रिया दिंदै भनेका छन्–‘अबको मेरो नयाँ भिजन भनेकै अमेरिकी फ्रस्ट भन्ने हो । अमेरिकी जनताको बर्बादीका दिन अब सकिनेछन् । अब जनताले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नेछन् ।’ ट्रम्पले जनता र सरकार साथमा...
निजी जेटदेखि करोडौं तलब, यस्तो हुन्छ अमेरिकी राष्ट्रपतिको लोभलाग्दो जीवन !
काठमाण्डौ । डोनाल्ड ट्रम्पले औपचारिक रुपमै शुक्रबार ४५ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा कार्यभार सम्हालेका छन् । अब आगामी ४ वर्षसम्म विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकाको सम्पूर्ण कमाण्ड ट्रम्पको हातमा हुनेछ । ट्रम्पमाथि विश्वले नै चाखलाग्दो नजरले हेरिरहेको छ र उनीमाथि विश्वास तथा आशा गर्नेहरुको संख्या पनि करोडौं छ । यो पद चुनौतिले भरिएको...
काठमाण्डौ । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एकपटक ट्वीट गरेर एक कम्पनीलाई ५ मिनेटमै अरबौं रुपैयाँको चूना लगाइदिएका छन् । यो पटक ट्रम्पका कारण जसले अरबौं रुपैयाँ केही मिनेटमा गुमाउनुपर्यो, त्यो हो अटोमोवाइल क्षेत्रको एक चर्चित र बलियो टोयोटा कम्पनी । कम्पनीको बारेमा ट्रम्पले गरेको एक नकारात्मक ट्वीटले केवल ५...
चीनबाट पहिलोपटक लण्डनका लागि छुट्यो रेलगाडी
काठमाण्डौ । चीनले लण्डनका लागि पहिलो मालगाडी(मालवाहक रेल) सेवा सुरु गरेको छ । यो रेल करिब १२ हजार किलोमिटरको यात्रा पूरा गरी लण्डन पुुग्नेछ । विश्वकै दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले आफ्नो कारोबार फैलाउनका लागि यो कदम चालेको हो । यो बेला चीन मन्दीको मारसँग पनि जुधिरहेको छ । मालगाडी रेल चीनको सिनजियाङस्थित इन्टरनेशनल कमोडिटी हब यीवुुदेखि...
►एकराज पाठक काठमाडौं। सन् २०१६ मा अमेरिकाले नयाँ राष्ट्रपति पायो, बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णयमा जनताले मोहर लगाए। सन् २०१६ का नौ ठुला घट्ना यस्ता रहे। १. डोनाल्ड बने अमेरिकी राष्ट्रपति सन् २०१६ को सबैभन्दा चर्चित घटना हो अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन। चर्चा राष्ट्रपतिको निर्वाचनभन्दा पनि उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प...